EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂-၇)
ဘာပြောပြော ဆင်ပေါ်က ဇေကမ္ဘာ
သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်ကို တရားစွဲမှု ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင် နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား တတိယအဆင့် အရှိန်မြှင့်တင်မှု (Third Wave) လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ
ဓါတ်လိုက်ခံနေရသူကို တွန်းဖယ်ပေးခဲ့သူ အမျိုးသား ဓါတ်လိုက်ခံရသဖြင့် သေဆုံး
ဦးပိန်တံတား တိုင်ခေါင်းများအတွင်း ဆေးလိပ်မီး ပစ်ထည့်မှုကြောင့် ကျွန်းတိုင်(၃)လုံး မီးလောင်
လှည်းတန်းဂုံးကျော်တံတားအနီးတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ခဲ့သဖြင့် (၉)ဦးဒဏ်ရာရ
အာဏာရှင်စနစ်ကို အားပေးသည့် မဘသကို ယုံကြည်မှုနည်းလာဟု မဘသ ဆရာတော်မိန့်
ကမ်းပါးပြိုမှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၀ ကျော် ပြောင်းရွှေ့
သပိတ်ကျင်းရှိ တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှုများ ဇူလိုင်လတွင် စတင်အရေးယူမည်
အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ပြဿနာများ မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆုံးရှုံးနိုင်ဟုဆို
ဘင်္ဂါလီနေအိမ်တစ်အိမ်တွင် စိတ်ကြွ ဆေးပြား ကျပ်သိန်း ၂၀၀ဝဖိုးခန့် ဖမ်းမိ
ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်နေသည့် နေရာတွင် စစ်တပ်က သေနတ် ၄၈ချက် ပစ်ဖောက်ခဲ့ဟုဆို
တပ်မတော်မှဗိုလ်ကြီးဆိုသူမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ယာဉ်ထိန်းရဲအား ဆဲဆိုစော်ကားမှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းတွင် ယာဉ်နောက်ပိုင်း ဆီတိုင်ကီ ဝိုင်ယာရှော့ခ်ဖြစ်၍ လင့်ခရူဇာတစ်စီး မီးလောင်
မီးပွိုင့်များတွင် တောင်းရမ်းနေသူများကို စီမံချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီး
မစားသင့်တဲ့ CP အမှတ်တံဆိပ် ကြက်သည်း ကြက်မြစ်တွေ ဖမ်းမိ
ပြင်သစ် နဲ့ ဂျာမနီ ကွာတားမှာ ဆုံပြီ
ပုဒ်မ (၄၃၆) ပြင်ဆင်ရေး- မင်းဘူး (ရုပ်/သံ)
ပုဒ်မ (၄၃၆) ပြင်ဆင်ရေး- ပြည်မြို့ (ရုပ်/သံ)
ဒေါက်တာရယ်၊ ဘောက်ဆာရယ်၊ ဘောက်ချာရယ် ပြီးတော့...
Posted: 01 Jul 2014 04:49 AM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အယုဒ္ဓယမြို့ မဟာချူလာ လောင်ကွန်ရာ ဇ၀ိဒယ လျတက်္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ဓမ္မပါရဂူ ဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့သော ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်အား မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ဇွန်လ ၂၇ ရက်တွင် ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ပြု ပူဇော်ပွဲတစ်ရပ်ကို မွန်ပြည်နယ် ဘီလင်းမြို့နယ်၊ ဇုတ်သုတ်စံပြ ကျေးရွာရှိ ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆံတော်ရှင်ဝန်း အတွင်း၌ ပြုလုပ် ပေးခဲ့သည်။ ပူဇော်ပွဲအစီအစဉ်အရ စေတီတော်ဝင်းအတွင်း ဆရာ တော်အား ဆင်ရတနာတော်ဖြင့်
Posted: 01 Jul 2014 04:36 AM PDT
သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်ကို တရားစွဲလိုက်တဲ့ အပေါ် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်သူတွေက ဒီနေ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးထဲက ပြည်သူ ၂၀၀ ကျော်က ပုသိမ်မြို့ကို လာရောက်ပြီး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြရာမှာ ပါဝင်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ကြည့်ရေး ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းထွန်းဦးက “ကျနော်တို့ ပြည်သူပြည်
Posted: 01 Jul 2014 04:55 AM PDT
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၃၀ ဇွန် ၂၇ နေ့ ၁၅၀၀ ချိန်တွင် နိုင်ငံတော် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု များအား တတိယအဆင့် အရှိန်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၌ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်နှင့် ဌာန၊ တပ်ဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အင်အား ၂၅၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက ပြောကြားရာ၌- ယနေ့ နို
Posted: 01 Jul 2014 03:24 AM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁ ၃၀.၆.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၃၄၀အချိန် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်း မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်ခံရ၍ သေဆုံးရောက်ရှိ နေကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေ သံချည်သံကွေး လုပ်သားဖြစ်သူ ကိုလမင်းထွန်း (၂၇)နှစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် နဖူးထိပ်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ဝဲဘက်ခြေဖ ၀ါးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ(၁)ချက်တို့
Posted: 01 Jul 2014 03:02 AM PDT
တောင်သမန်အင်းရှိ ဦးပိန်တံတားကြီးတွင် တိုင်ခေါင်းများ အတွင်း ဆေးလိပ်မီး ပစ်ထည့်မှု များကြောင့် ယခုဇွန်လ အတွင်း ရှေးဟောင်းကျွန်းတိုင် သုံးလုံး မီးသင့်လောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း မန္တလေးမြို့ ရှေးဟောင်း သုသေသနနှင့် အမျိုးသား စာကြည့်တိုက်များ ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ဦးပိန် တံတားကြီး၏ တိုင်အမှတ် (၄၈) သည် ဇွန်လ (၄) ရက်နေ့ ညနေ အချိန်တွင် မီးလောင်ကျွမ်း ခဲ့သဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း ငြိမ်းသတ် ခဲ့ရပြီး ၊ ဇွန်လ
Posted: 01 Jul 2014 02:42 AM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁ ၃၀.၆.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၂၃၅၀အချိန် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းအတိုင်း မြေနီကုန်းဘက်မှ (၈)မိုင် ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း အောင်ထွန်း မောင်းနှင်လာသည့် ၁စ/---- နစ်ဆန်း ကက်စတာထရက် အဖြူရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သည် လှည်းတန်းဂုံးကျော် တံတားအနီး အရောက် အရှိန်မထိန်း နိုင်ဘဲဖြစ်ကာ ၀ဲဘက်သို့တိမ်းမှောက်စဉ် လမ်းလယ်ကပ်တုံးများအား တိုက်မိခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်းမှာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် ယာဉ်ကိုထားကာ ထွက်ပြေး
Posted: 01 Jul 2014 02:36 AM PDT
အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလှိုင် ၁ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။ မဟာသန်္တိသုခ အရေး ကိစ္စကို တစ်စုံတစ်ရာ ပြောကြားခြင်းများ မရှိဘဲ အာဏာရှင်ကြိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း များ တွေ့လာရသည့် အတွက် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့(မဘသ) အပေါ် အဖွဲ့ဝင် သံဃာတော် အချို့က ယုံကြည်မှု အားနည်းလာသည်ဟု မဘသအဖွဲ့ဝင် ဦးသောဘိတ (ဘ၀အလင်းရောင် ဆရာတော်)က မဇ္ဈိမကို မိန့်သည်။ “အဓိက ကတော့ အာဏာရှင်စနစ်ကို အားပေးတဲ့စကားသံတွေ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်တာပဲ။
Posted: 01 Jul 2014 02:31 AM PDT
အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလှိုင် ၁ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၇ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အမရပူရအမတ် ဦးသိန်းထွန်းဦးက ကေတီဗီတွေ၊ မာဆတ်တွေကိစ္စ မေးခွန်းမေးပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လို့ ခေါ်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းအမျိုးအစားပါ။ သက်ဆိုင်ရာက အဲဒီကေတီဗီ၊ မာဆတ်တွေကို အရေးမယူဘူးလား၊ ရဲတွေ၊ အာဏာပိုင်တွေကို လိုင်းကြေးပေးပြီး ဖွင့်လှစ်နေကြတာကြောင့် အဲဒီလိုင်းကြေးယူ၊ အဂတိလိုက်စားတဲ့ ရဲနဲ့
Posted: 01 Jul 2014 02:19 AM PDT
မကွေးတိုင်း စလင်းမြို့နယ်တွင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဧရာဝတီမြစ်ရေကြီးလာပြီး ကမ်းပါးပြိုမှုကြောင့် ဘိုကုန်းနဲ့ရေပေါ်ကျွန်းရွာက အိမ်ခြေ ၁၀ လုံးကျော်ဖျက်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ရတယ်လို့ ဘိုကုန်းကျောင်းဆရာတော် ဦးသီရိဓဇ က မိန့်ပါတယ်။ နေအိမ်တွေ ဖျက်ရတဲ့အတွက် နေထိုင်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေသလို လုပ်ကိုင် စားသောက်စရာ မြေနေရာမရှိ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ကြားပါတယ်။ ကမ်းပါးပြိုမှုဟာ နှစ်စဉ်လိုလို ဖြစ်ပွားနေလို့ နှ
Posted: 01 Jul 2014 02:15 AM PDT
Daily Eleven သတင်းစာကို လှန်ကြည့််လိုက်တော့ “ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်း၏ ကားဟုဆိုကာ ဘင်္ဂါလီကိုးဦးအား တရားမ၀င် သယ်ဆောင်လာမှုတွင် အငြိမ်းစားရဲမှူးကြီး နှစ်ဦး၏ သားနှင့်သမီး ပါဝင်ပတ်သက်နေ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ၂၈.၆.၂၀၁၄ နေ့ သတင်းစာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းတောင် ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် လစာမထုတ်ရသေးခင် နာမည် အလွဲသုံးစား လုပ်မယ့်သူက ပေါ်လာနှင့်ပါပြီ။ ရခိုင်ရိုးမကိုြ
Posted: 01 Jul 2014 02:00 AM PDT
မန္တလေး၊ ဇွန် ၃၀ ပြည်တွင်းရွှေတူးဖော်မှု အများဆုံး ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သော မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး သပိတ်ကျင်း မြို့နယ်တွင် တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရွှေတူးဖော်နေသူများ ရှိနေသဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဇူလိုင်လမှ စတင်ကာ စိစစ် အရေးယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီး ဦးသန်းစိုးမြင့်က ပြောကြားသည်။ တရားမဝင် တူးဖော်နေသူများ အနေနှင့် သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ တရားဝင်ေ
Posted: 01 Jul 2014 01:59 AM PDT
မန္တလေး၊ ဇွန် ၃၀ ပြည်တွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၌ လုပ်ခလစာ အပါအဝင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး စက်မှုဇုန်များလည်း တိုးလာနေရာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ပြဿနာများ မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆုံးရှုံးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သစ်တောနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး ဦးသန်းစိုးမြင့်က ပြောကြားသည်။ မန္တလေးမြို့တော်ရှိ Great wall ဟိုတယ်တွင် ဇွန်လ ၃၀
Posted: 30 Jun 2014 09:16 PM PDT
မောင်တော၊ ဇွန် ၃၀- မူးယစ်ဆေး ဝါးအမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ဇွန် ၂၈ရက်ညနေ လေးနာရီ က မောင်တောမြို့ မြို့ဦး အုပ်စု လသာရွာနေ ဟာမိတ်တူ ဆောင်း(ဘ)အဒူရော်မန် ဘင်္ဂါလီ လူ မျိုး၏နေအိမ်အား မောင်တော မူး ယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၄၆)မှ ရဲအုပ်ဇော်လင်း ထွန်း၊ မောင်တောမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲ အုပ်တိုးတိုးနှင့် ရဲအုပ်ဝင်းဌေးဦးတို့ မှာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဖြင့် သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ မူးယစ် ဆေးဝါး သိန်း၂၀၀၀
Posted: 30 Jun 2014 08:44 PM PDT
မန္တလေး၊ မဇ္ဈိမ။ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ မြေမွန်ကျေးရွာတွင် စစ်တပ်က သိမ်းဆည်းမြေ ဧက ၃ဝဝကျော်ကို ပြန်ရရန် ဇွန်လ ၈ရက်မှ စကာ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့သည်ကို ဇွန်လ ၃ဝရက် နံနက် ၆နာရီကျော်က စစ်ကား ခြောက်စီး ရောက်လာပြီး စစ်သား ၁ဝဝခန့်က ဝိုင်းထားပြီး နံနက် ၁ဝနာရီခန့်တွင် သေနတ် ၄၈ချက် ဖောက်ခဲ့သည်ဟု မြေမွန်ကျေးရွာမှ လယ်သိမ်းဆည်းခံ တောင်သူ ကိုစောမွန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ “
Posted: 30 Jun 2014 08:36 PM PDT
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်င/က ရပ်ကွက်တွင် တရားမဝင် ကန်ထရိုက်တိုက်များ ဆောက်လုပ် နေမှုနှင့် ပက်သက် ၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ခြင်းအပေါ် မကျေနပ်သူ အချို့မှ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်သူ များအား တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခု ည ၁၀ ခွဲအချိန်၌ င/က ရပ်ကွက်အတွင်း ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်းသိရပါ သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်င/က ရပ်ကွက်တွင် တရားမဝင် ကန်ထရိုက်တိုက်များ ဆောက်လုပ် နေမှုနှင့်ပက်သက်၍ ၃၀.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ နေ့ လည် ၃
Posted: 30 Jun 2014 08:22 PM PDT
ယနေ. (၃၀-၆-၂၀၁၄) ည (၇း၄၄) မိနစ် မန္တလေးမြို. ၃၅ လမ်း၊ လမ်း(၈၀)ဒေါင့်တွင် ရှေ.မှာ ဗင်ကားတစ်စီးအား နောက်မှ မတ်တူးကား တစ်စင်းမှ ၀င်တိုက်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လာရောက် စစ်ဆေးသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲကို တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ကြီးဆိုသူ တစ်ဦးမှ လူအများရှေ.တွင် ဆဲဆိုစော်ကားမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို. အော်ဟစ် ဆဲဆိုနေသူမှာ သူကိုယ်သူ ဗိုလ်ကြီးနိုင်လင်းဝင်း ဟု ပြောဆိုလျက် လ ပ ခ ( အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ) ၊
Posted: 30 Jun 2014 08:09 PM PDT
နေပြည်တော် ဇွန် ၂၉ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေတာ ရှည်မြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၆၁/၁) အနီးတွင် ယခုလ ၂၇ ရက် ညနေ ၃ နာရီက ယာဉ်တစ်စီးမီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရ သာဂ ရအမြန်လမ်းရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များ၊ အမြန်လမ်းမီးသတ်တပ် ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရေတာရှည်မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကသွားရောက်ဝိုင်းဝန်း ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ညနေ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင်
Posted: 30 Jun 2014 08:04 PM PDT
မန္တလေးမြို့တွင်း မီးပွိုင့် များတွင် တောင်းရမ်းနေသူများ ကို စီမံချက်ချကာဖမ်းဆီးနေ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဇွန်လ ၂၈ရက်က မန္တလေးမြို့လယ် ၇၈လမ်းနှင့် ၃၅လမ်း ထောင့်ရှိ မီးပွိုင့်တွင် တောင်းရမ်း နေသူ(၁၃)နှစ်နှင့် (၂)နှစ်အရွယ် ကလေးနှစ်ဦးအား လူမှုဝန်ထမ်းပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊အနာကြီိး ရောဂါသည်တစ်ဦးအား ရေနံ့သာ ဆေးရုံသို့ ပို့ပေးခဲ့သည်။ ထို့အ ပြင် ကလေးငယ်များအားပိုက်ဆံ တောင်းရမ်းခိုင်းရန်အတွက် ဆိုင်
Posted: 30 Jun 2014 08:03 PM PDT
မြဝတီ နယ်စပ်ကနေ ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ တင်သွားလာတဲ့ မစားသင့်တဲ့ CP အမှတ်တံဆိပ် ကြက်သည်း၊ ကြက်မြစ်တွေကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မြဝတီ၊ မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ အဆင့်ဆင့် သယ်ယူလာတဲ့ အဲဒီ ကြက်သည်း၊ ကြက်မြစ်တွေကို ညောင်ခါးရှည် မိုဘိုင်းတင်းမ်အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ကျော်က ပြောပါတယ်။ ကြက်သည်း၊ ကြက်မြစ် အလေးချိန် ၂ ဒသမ ၅
တပ်မတော်က သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်ယာမြေပေါ်မှာ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမယ့် တောင်သူတွေကို တပ်မတော် တပ်ရင်း ၄၂ နဲ့ တပ်မ ၃၃ တို့က ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ မြေမွန်ကျေးရွာမှာ တပ်မတော်က ၁၉၉၁-၉၂ ဝန်းကျင်က သိမ်းထားတဲ့ လယ်မြေတွေပေါ်မှာ တောင်သူ ၃၀ က ထွန်ယက်ပြင်နေချိန် တပ်မတော်အင်အား ၁၀၀ လောက်ကလာပြီး ဝိုင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ရက်ကတော့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ပါ။ ဝန်းရံခံထားရတဲ့ေ
Posted: 30 Jun 2014 07:53 PM PDT
ကမ္ဘာ့ဖလား ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်အဖြစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့က ကစားတဲ့ ပွဲတွေမှာ ဥရောပက နာမည်ကြီးအသင်း နှစ်သင်းက အာဖရိက အသင်းတွေနဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီရဲ့ ပထမဂိုးကို ရှာလေက သွင်းပေးခဲ့ ဂျာမနီက အယ်လ်ဂျီးရီးယားကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ နိုင်ပြီး၊ ပြင်သစ်က နိုင်ဂျီးရီးယားကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရသွားပါတယ်။ ဂျာမနီ-အယ်လ်ဂျီးရီးယား ဂျာမန်တွေ လွယ်လွယ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ကြပေမယ့် အဲဒီအထင်မှားခဲ့ပါတယ်။
Posted: 30 Jun 2014 07:43 PM PDT
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၄၃၆) ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း) ပူးတွဲပြီး မကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့မှာ ဒီကနေ့ လူထုဟောပြောပွဲ တခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုဇော်တူးက မင်းဘူးမြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 30 Jun 2014 07:42 PM PDT
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၄၃၆) ပြင်ဆင်ရေး ဟောပြောပွဲကို ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့မှာ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။ ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 30 Jun 2014 07:38 PM PDT
စာရေးသူရဲ့အဒေါ်တစ် ယောက် ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းလာတက်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဆောင်းပါး က ဖြစ်လာတာပါ။ အဒေါ်က စာရေးသူတို့နယ်မြို့က အလုပ်သမားရုံးမှာအလုပ်လုပ်ပါ တယ်။ အလုပ်သမားစာရင်းတွေ ကို ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့လုပ်ဖို့ အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာ သင်တန်းပေးတဲ့ အတွက် သင်တန်းလာတက်ရ တယ်။ Software ကုမ္ပဏီကတာ ဝန်ရှိသူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်ကို အသုံးချပြီး ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရမယ်၊ ဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်၊ ဘယ်လိုအချိန်
မ.ဆ.လခေတ်မှာ ဝန်ထမ်းတွေ ‘‘ဘောက်ချာ’’နဲ့လုပ်စားကြတဲ့အကြောင်း သရော်ထားတဲ့လူပြော၊ သူပြောဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဌာနတစ်ခုကို အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရောက် လာမှာမို့ ဌာနကဝန်ထမ်းတစ်ဦး ကို အရာရှိက တစ်ပိဿာလောက် ရှိတဲ့ ကြက်တစ်ကောင်သွားဝယ် ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းက လည်း အရာရှိလိုချင်တဲ့ ကြက်ကို ဝယ်ပြီး ပြန်ရောက်လာတော့ ကုန် ကျစရိတ်ကို ဘောက်ချာနဲ့ ပြန် တင်ပါတယ်။ အဲဒီဘောက်ချာကို